Iindaba - Yintoni ubuGwebu bentsimbi? Ulwahlulo lwensimbi kunye nokufakwa kwezicelo
I-Metal Foam ibhekisa kwizinto ezizodwa zesinyithi ezine-foam pores.Ngokusebenza kweempawu zayo ezizodwa, i-foam yentsimbi inothotho lwezinto ezilungileyo, ezinje ngokuxinana okuphantsi, ukusebenza kakuhle kobushushu, ukusebenza kakuhle kwesandi kunye nokukwazi ukufunxa amaza ombane.
Inokungena okuphezulu komoya, phantse zonke ii-pores zixhunyiwe, i-BET ye-pores inkulu kwaye incinci.
Ukwahlulahlula amagwebu kwensimbi
I-Metal Foam ikakhulu njengogwebu lwealuminiyam, igwebu lobhedu, igwebu le-nickel kunye namanye amagwebu e-alloys.
I-Aluminium foam ene-alloys ukukhanya ubunzima kwaye ineempawu zokufakwa kwesandi, ukufudumeza ubushushu, ukunciphisa ukungcangcazela, ukothuka kwamandla kunye nokutsalwa kombane, njl njl. isixhobo sokucutha ukungcangcazela ngombane, isixhobo sokukhusela umbane ngombane, njl njl.
Ngenxa yolwakhiwo lwepore kunye ne-porosity ephezulu, i-nickel foam inentsebenzo ephezulu yegesi, indawo ephezulu ethile kunye namandla e-capillary. Isetyenziswa ikakhulu njengezinto ezisebenzayo ukwenza amacebo okucoca ulwelo, iiatomizers, isiguquli se-catalytic, iipleyiti zebhetri kunye nabatshintshi bobushushu bangaphambili.
I-foam yobhedu ine-conductivity elungileyo kunye ne-ductility, iindleko zokulungiselela ezisezantsi kune-nickel foam, kunye nokuqhuba okungcono, ke inokusetyenziselwa ukulungiswa kwezinto ze-anode zebhetri (izinto ezithwala izinto), iziphathi ze-catalyst kunye nezinto ezikhuselayo zombane.
Ngokukodwa, amagwebu obhedu asetyenziswa njengezinto ezisisiseko zebhetri ye-elektrode, eneenzuzo ezibonakalayo. Nangona kunjalo, ukuxhathisa ukubola komlilo akulungile njenge-nickel, ethintela ukusetyenziswa kwayo.
Izicelo zensimbi zensimbi
Amagwebu esinyithi anamandla athile, amandla amdaka kunye nokongezwa, kwaye anokusetyenziswa njengezinto ezilula zokwakha.Izixhobo kudala zisetyenziswa njengezinto ezingundoqo zokwenza umboniso wenqwelomoya. Ngenxa yokuba inokudityaniswa, ukunamatheliswa okanye ukufakelwa kwisakhiwo, inokwenziwa isandwich enelungu. (ngenxa yokuqhuba kakuhle kobushushu bayo) kunye nezixhobo zokufika kwisiphekepheke, njl.
Ulwakhiwo, amagwebu esinyithi ayadingeka ukwenza ukukhanya, okunzima, kunye nezinto ezingatshiyo ngomlilo, ukukroba, okanye ukuxhasa ezi zinto. Ukukhawulezisa kunye nokudodobalisa iilifti zala maxesha ngesantya esiphezulu kunye nesantya esiphezulu sikwafuna ubume obulula besinyithi esinamagwebu Ukufunxwa kwamandla kunye neempawu zokuphatha ukunciphisa amandla okusetyenziswa. Iigobolondo zesilinda zisetyenziswa ngokubanzi kubunjineli, njengee-fuselages zeenqwelomoya kunye neoyile ye-RIGS. amagwebu aqhubekayo: iikhoyili, isakhiwo sinamandla amakhulu kuneqokobhe elingafakwanga eliqinisekisiweyo lobubanzi obulinganayo nobukhulu.
Igwebu lobhedu kulula ukulivelisa kwaye kulula ukuba likhubazeke, ke lilungele izinto zokubopha.
Amagwebu esinyithi angasetyenziselwa ukuqinisa izinto ezininzi eziphilayo, ezingaqhelekanga nezenziwe ngesinyithi, umzekelo, izinto ezenziwe nge-nickel foam reinforced aluminium alloy (NFRA) yenziwe emva kokuqiniswa ngokugcwalisa i-aluminium etyhidiweyo kwi-nickel foam.
Isinyithi sogwebu silunge kakhulu ukuba sisetyenziswe njengesixhobo esincinci sokuthwala iipaneli ezahlukeneyo, iigobolondo kunye neetyhubhu zokwenza iindidi zezinto ezinamatheleyo. Kwisikhululo senqwelomoya esisebenzisa iglasi okanye ikharbhon yefibre yesikhumba esihlanganisiweyo.Lo maleko wesikhumba wahlulwe kwincindi yobusi be-resin nge-aluminium yentsimbi okanye iphepha, okanye ngogwebu oluqinileyo lwepolymer ukunika ipaneli yesandwich ukomelela okuthe ngqo kokugoba kunye namandla athile okugoba. Itekhnoloji yandisiwe kwezinye izicelo apho ubunzima sisalathiso esiphambili: iziphekepheke, iisledi, izikhephe zokubaleka kunye nezakhiwo ezihambayo.
Ukukhuselwa kwesikhuseli yenye yezona zinto ziphambili ezisetyenzisiweyo kumagwebu esinyithi, ekufuneka abenamandla okufumana amandla ngelixa elawula amandla amakhulu asebenza kwinto ekufuneka ikhuselwe ngaphantsi komda wokubangela umonakalo.
Ukulawula uxinano lwesihlobo, amandla amagwebu esinyithi anokuhlengahlengiswa kuluhlu olubanzi.